Kindle Oasis vs Kobo Aura H2O, iza no tsara kokoa? | Ireo mpamaky rehetra
Joaquin Garcia | | Amazon Kindle, mpamaky, kobo
Omaly ny Amazon Kindle vaovao dia namidy, fitaovana izay nambaran'i Bezos tenany ho ny eReader tsara indrindra fa ny mpifaninana amin'i Amazon kosa mbola manana zavatra holazaina momba izany. Izany no antony nilainay raiso ny Kindle Oasis miaraka amin'ny Kobo Aura H2O, ireo eReaders roa matanjaka indrindra sy lafo indrindra eny an-tsena.
Ny marina dia na eo aza io fampitahana io, ireo mpamaky roa dia fitaovana izay fizarana samihafa no kendreny na dia iraisan'ny roa aza izy ireo dia mitady ny hanome ny traikefa famakiana tsara indrindra ho an'ny mpampiasa, zavatra izay ezahinay refesina sy aseho anao.
1 Famaritana Oasis Kindle
2 Kobo Aura H2O famaritana
7 Endri-javatra fanampiny
Famaritana Oasis Kindle
Manana efijery 6-inch Touchscreen miaraka amin'ny teknolojia Paperwhite miaraka amin'ny E Ink Carta ™ sy hazavana famakiana ao anatiny, 300 dpi, haitao fanaovana font namboarina ary 16 mizana volondavenona
WiFi kinova 131/128 grama ary 1133/240 grama ny kinova WiFi + 3G (Aseho aloha ny lanjany nefa tsy misy fonony ary faharoa miaraka aminy)
4 GB izay ahafahanao mitahiry eBook mihoatra ny 2.000, na dia miankina amin'ny haben'ny boky tsirairay aza izany
Fifandraisana WiFi sy 3G na WiFi ihany
Format 8 Kindle (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, tsy voaaro MOBI, PRC zanatany; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP amin'ny fiovam-po
Kobo Aura H2O famaritana
Izy io dia mampiditra efijery mikasika 6,8-inch miaraka amin'ny teknolojia E Ink Letter, hazavana famakiana mifangaro amin'ny ComforLight, 365 dpi ary haitao endri-tsoratra tsara indrindra.
179 x 129 x 9.7 mm ary 233 gr.
4 Gb tahiry anatiny.
Fifandraisana Wifi sy output Microusb.
Fiainana bateria 2 volana
Fiatrehana hazavana sy rano mitambatra.
Ny famolavolana Kindle Oasis dia tena nampiady hevitra nefa tiako ihany koa, zavatra mitovy amin'izany no nitranga tamin'ny Kobo Aura H2O, saingy amin'ny ambaratonga kely kokoa. Ny marina dia amin'ny fitaovana roa ireo dia mamaky famakiana milamina kokoa ny endrika. afaka mamaky ny eReader nefa tsy tsikaritra fa mavesatra ny tanantsika. Amin'io lafiny io dia tsara ny manamarika ny fonony vita amin'ny fingotra an'ny Kobo Aura H2O izay manao azontsika tanterahina tsara amin'ny rantsantanana vitsivitsy fotsiny ary na dia amin'ny felatanana aza. Raha ny momba ny Kindle Oasis, ny famaranana matevina dia mahatonga antsika hanana fahatsapana manana boky nefa ny tampony dia tsy azo tazomina amin'ny felatanana. Amin'ity lafiny ity dia mieritreritra aho ny Kobo H2O dia mandresy ny Kindle Oasis.
Ny Kobo Aura H2O dia manana efijery 6,8-inch miaraka amina vahaolana 1430 x 1080 teboka miaraka amin'ny 265 dpi. Manana ny teknolojia Carta toy ny Kindle Oasis fa ny jirony dia tsy tsara toa ny Kindle Oasis. fa tsy ny Kindle Oasis dia manana vahaolana avo kokoa, fanatsarana jiro saingy somary kely kokoa izy io. Na eo aza ny habe, amin'ity lafiny ity Kindle Oasis dia mihoatra ny mpifaninana aminy.
Ny baterian'ny fitaovana roa dia tena tsara, saingy tena tsara, avo kokoa noho ny iray volana amin'ny fitaovana rehetra, saingy tsy maintsy raisina izany ny Kindle Oasis dia manana bateria mpanampy Manitatra bebe kokoa ny fizakantenan'ny eReader izany. Saingy tokony ho marin-toetra ianao ary izany koa dia azo atao amin'ny PowerBank to the Kobo Aura H20. Toa izany hatrany ny famahana haingana dia manome ny Kindle Oasis ho lohany ao amin'ny Kobo Aura H2O fa tsy vitsy satria vitsy ny mpampiasa mila eReader manana fahaleovan-tena lehibe.
The Kobo Aura H2O mampiasa ny lozisialy mitovy amin'ny sisa amin'ireo fitaovana Kobo izay midika fa afaka manova eReader isika nefa tsy mila mianatra mampiasa azy io, ho fanampin'ny mifanaraka amin'ny Pocket, serivisy tsara vakiana ao aoriana. ny Kindle Oasis dia mifamatotra amin'ny Goodreads sy SendToKindle, fampiharana roa lehibe izay ankafizin'ny mpampiasa maro. Fa momba ny endrika, ny Kobo Aura H2O dia manohana ny endrika ePub raha ny Kindle Oasis kosa tsy. Amin'ity lafiny ity azontsika atao ny milaza fa ny Kobo Aura H2O dia mandresy, fa tsy be loatra raha tena tiantsika ny tontolo iainana Amazon.
Ny Kindle Oasis dia miaraka amina boaty fanomezana ary tena mahazaka ankoatry ny fananana keypad iray mahatonga azy ny Oasis dia miasa tsara ho an'ny olona tanana havia na havanana. Ity dia teboka matanjaka satria misy olona maro izay, noho ireo olana ireo, dia tsy afaka mamaky tsara amin'ny eReader; fa amin'ny tranga Kobo Aura H2O, IP67 fanamarinana ary koa ny ComfortLight izay mifehy ny hazavana Mikasika ny hazavana manodidina, singa fanampiny afaka manintona olona betsaka izy ireo. Amin'ity lafiny ity dia mieritreritra aho mifamatotra ireo fitaovana roa ireo Arakaraka ny toe-javatra misy antsika dia ho tsara kokoa ny iray na ny iray hafa, raha tanana ankavia isika dia misafidy ny Kindle Oasis fa raha ny fandehanana any amoron-dranomasina matetika dia ny Kobo Aura H2O no safidy tsara indrindra.
Ny vidiny dia nanjary antony lehibe ho an'ny maro, ny mpamaky ereader lehibe dia tsy vitan'ny pixel na teknolojia ihany fa ny vidiny, eReader lehibe dia manana vidiny ambany, hoy izy ireo. Ny Kobo Aura H2O dia mitentina 179 euro, vidiny lafo be ho an'ny eReader fa ny tena izy dia vonona ny hividy mpamaky toy izany ny olona amin'ity vidiny ity. ny Ny Kindle Oasis dia mitentina 289 euro, euro zato mihoatra ny Kobo Aura H2O, fa raha raisintsika izany mitondra tranga misy bateria mpanampy, ny vidiny dia mety ho mora vidy kokoa noho ny Kobo Aura H2O satria tsy miaraka amin'ny bateria na fonony io.
Amin'io lafiny io dia toa izany ny mpandresy ho an'ny maro dia ny Kobo Aura H2O fa tsy tokony hohadinointsika ny vidiny fanampiny ka toa ny Kindle Oasis dia hanome fahagagana amin'ny ho avy.
Vidio: Kobo Aura H2O maintyKobo Aura H2O »/] | E-mpamaky Kindle Oasis miaraka amin'ny ...Oasis Kindle »/]
Izaho manokana dia mieritreritra fa eReaders roa lehibe izy ireo, ny Kindle Oasis dia nitondra vaovao kely fa ny nentiny dia mahaliana tokoa ary mety hahatonga antsika hanadino ny tetika nolazain'ny Kindle Voyage. Nefa tsy maintsy manao izany koa ianao tsarovy fa ny Kobo Aura H2O dia efa nisy herintaona mahery, eReader lehibe iray izay na eo aza ny fahanterany dia afaka mifaninana amin'ireo zava-baovao toy ny Kindle Oasis. Raha tsy maintsy misafidy izay mety ho azo atao aho Hijery ny ekosistia iza no tiako indrindra, raha ny Kobo na ny ekosistema Amazon ary avy eo dia misafidy ilay eReader mifanitsy aminy aho. Avia, tsy mazava ny zavatra fa ny fitaovana roa dia fitaovana lehibe na tian'ny orinasany na tsia
Iza amin'ireo no hijanonanao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » Hardware » mpamaky » Oasis Kindle vs Kobo Aura H2O, fifandonan'i colossi?
Amin'ireo Kobo dia tiako ny haben'ny efijery, ny mpamaky karatra ary mamaky endrika bebe kokoa izy ... saingy manasazy ny lanjany lehibe kokoa.
Amin'ireo Oasis, na dia mbola tsy nanandrana azy aza aho dia hifikitra amin'ny endriny (tsy miombon-kevitra aminao aho, heveriko fa tokony hotehirizina tsara kokoa ny jirofo amin'ny tanana iray), ny fahazavana sy ny tontolo iainana any Amazon.
Joaquin Garcia dia hoy izy:
Ny zavatra avoarinao dia ny olan'ny fitaovana roa, izay misy ny mahatsara sy maharatsy azy amin'ny fomba manokana ho an'ny mpampiasa tsirairay, fa raha ny fahalalako azy, ny Kindle Oasis dia manana endrika ratsy ratsy kokoa tazonina nefa tsy manadino ilay tranga izay nanova tanteraka ny fomba hisamborana azy. Avia, izany no fahitako azy, saingy mieritreritra aho fa rehefa hita bebe kokoa ny Kindle Oasis dia ho voavaha ny fisalasalantsika, sa tsy izany?
Misaotra namaky sy manaraka anay !!!
Valiny tamin'i Joaquín García
Raha ny mpamaky Amazon farany izay manana vidiny 300 euro fotsiny dia tsy maharesy mpamaky izay nivoaka mihoatra ny herintaona lasa izay, dia tsy nihatsara izy ireo ka mendrika ny ovaina. Manana ny H2O aho ary hiandry hahita izay navoakan'i Kobo amin'ity volana ity, na dia tokony ho tsara ho ahy aza ny manova azy ...
Salama Dani, mila milaza fotsiny aho hoe manomàna ny vola satria nanome antoka anay nandritra ny volana maro ny solontena Kobo fa ny eReaders vaovao dia hihoatra ny ankehitriny. Tsara ny endrik'izy ireo saingy tsy ho fantatsika hatramin'ny farany. Misaotra namaky an'i Dani !!!
Moses Martin dia hoy izy:
Fantatrao ve raha misy Kobo eReaders vaovao hanana rafitra ara-batana hamadihana ny pejy (bokotra, sensor pression, sns ...? Ho ahy dia teboka voafaritra io rehefa mifidy mpamaky ... tsy hitako ny fahasoavana mihetsika ny rantsan-tànako hikasika ny efijery.
Valiny tamin'i Moisés Martín
Ivan Romero dia hoy izy:
Inona no nanjo ilay Kindle Paperwhite vaovao nivoaka (izao ve ??) ..
Mamaly an'i ivan romero
Ny Oasis dia tsy isalasalana fa eReader tena tsara, fa TSY MISY, ary averiko TSY MISY, manamarina ity vidiny ity.
Raha be indrindra, dia mety manana ny vidin'ny Voyage izy io, saingy betsaka kokoa no tsy misy dikany.
Amin'ity lahatsoratra ity dia manaitra ahy be ny fampitahana maodely roa samihafa, satria tsy mitovy ny fampiasana sy ny fiainana mamaky.
Heveriko fa na dia mbola mitohy amin'ny endrika 6 "aza i Amazon, dia tombony Kobo rehetra no mitombo ao Espana.
Na inona na inona fahasamihafana amin'ny vidiny (samy lafo avokoa), ny haben'ny efijery (6 ″ dia ampy), ary ny androm-batterie (herinandro iray famakiana mafy dia ampy ho ahy), ny lesoka roa lehibe hitako dia:
Mandrehitra: «tsy misy ePub, tsy misy eReader»… Tiako ilay fehezanteny ary fintininy izany.
Kobo: azonao atao izao ny manavao rindrambaiko ary mamela ny famakiana marindrano (fototra hamakiana eo am-pihinanana)
119876 Louis dia hoy izy:
Raha ny fahitako azy dia lafo loatra ity "oasis" ity, antenaiko fa hahomby amin'ny varotra izy ireo saingy ny fahasamihafana misy amin'ny kobo dia kely ary amin'ny toe-javatra misy antsika dia ny tsy handany vola. Manana iray amin'ireo karazany voalohany indrindra aho ary hivadika ho kobo aho satria hanova ny endrika ho format «amazon» ... tsara, manantena aho fa hamoaka zavatra vaovao i kobo.
Mihazona ny Kindle Paperwhite?
Faly tamin'ny Kindle 3 nandritra ny 6 taona aho mandra-pikatso, izao dia te-hividy ny Kindle Voyage fa ilay voalohany tonga tamiko dia nanana pixel maty mamiratra ary ny faharoa kosa dia manana pixel mainty maro ary ankehitriny dia tsy maintsy averiko izy ireo .
Tiako ny amazona, saingy heveriko fa nifindra tany amin'ny Kobo H20 aho satria heveriko fa hanao fanaraha-maso kalitao bebe kokoa amin'ny vokatr'izy ireo noho i Amazon.
Tsy misy mpamaky ve izay manana rindrambaiko handrindrana ireo naoty miaraka amin'ny rahona ary ho afaka hijerena azy avy eo amin'ny fitaovana (finday na pc)?